Ukulandelwa kukaFatou Bensouda e-ICC: abazongenela ukhetho bazabalaza - IJeune Afrique - teles idluliselwe
Izinga lobugebengu laseNingizimu Afrika lehla ngesikhathi ...
Indoda yaseKano ekhiyiwe egaraji labazali bayo iyasindiswa ...
UFatou Bensouda, Umshushisi Jikelele weNkantolo yezobugebengu Yomhlaba wonke, ngonyaka we-2018. © Wiebe Kiestra ye-JA
Abasolwa abane abaqokelwe lesi sikhundla sokuba ngumshushisi we-International Criminal Court badlulise izingxoxo zomsebenzi uqobo. Isipiliyoni esiyingqayizivele.
"Ngabe ubona kufanele yini ukuthi umshushisi abonakale? "" Ngabe uzoba nokushayisana kwezintshisekelo uma ngabe wakhethwa? "" Yiziphi izindlela okufanele zihole ukukhethwa kwamacala aphethwe yihhovisi? "... Kuyisenzo esiyinqaba lapho abavotelwa abane njengamanje bezongena esikhundleni sikaFatou Bensouda, umshushisi wamanje weNkantolo yezobugebengu yamazwe omhlaba, oqale ngoJulayi 29 no-30.
Isikhathi esingaphezu kwamahora ayisithupha, baphendula imibuzo evela kubameli be-States Parties kanye namalungu omphakathi. Ingxoxo yemisebenzi yangempela, eyenziwe nabantu abaningana, ukuthola isikhundla esithandwayo nesepolitiki kakhulu, ebibanjwa ngesikhathi sevidiyo kuvulelwa umphakathi.
Inketho ekhethiwe yokuvumela uMorris Anyah (United States-Nigeria), uSusan Okalany (e-Uganda), uFergal Gaynor (e-Ireland) noRichard Roy (Canada), abazongenela ukhetho okhethwe ikomidi lochwepheshe abane, ukuthi benze kangcono Yazi amalungu e-Assembly of States Parties. Futhi kukhona ukuphuthuma, laba abanomsebenzi onzima wokufinyelela esivumelwaneni sokuqokwa komshushisi weNkantolo esizayo ngaphambi kukaDisemba olandelayo.
I-WTO: asikho isivumelwano sokuqoka uMqondisi-wethutyana wesikhashana - Jeune Afrique
Izinga lobugebengu laseNingizimu Afrika lehla ngesikhathi kuvaleka
Indoda yaseKano ekhiyiwe egaraji labazali bayo isindiswa ngamaphoyisa ...